Neymar JR Oo La Waydiiyay Hal Sharci Oo Uu Kubbada Cagta Ka Badali Lahaa Haddii Uu Maamulkeeda Hayn Lahaa, Muxuu Yahay Sharcigaasi? - Wargane News
Home Sports Neymar JR Oo La Waydiiyay Hal Sharci Oo Uu Kubbada Cagta Ka...
Neymar JR ayaa maanta qayb ka ahaa xaflad ay kooxdiisa Barcelona iyo shirkada Gillette ay ku kala saxiixdeen heshiis wada shaqayneed ,waxaana intii ay xafladani socotay xidiga ree Brazil la waydiiyay hal sharci oo uu kubbada cagta ka badali lahaa haddii uu maamulkeeda hayn lahaa.
Neymar ayaa sheegay in uu badali lahaa sharciga ciyaartoyda u diida in ay garanka ama maaliyada iska saaraan marka ay gool dhaliyaan wuxuuna sheegay in uu meesha ka saari lahaa sharciga isla markaana uu jamaahiirta la dabaal degi lahaa inkasta oo hadda kaadhka digniinta ah lagu bixiyo arintan.
Neymar JR oo su’aashan ka jawaabaya ayaa yidhi: “Waa wax adag in aan sheego sharciga aan badali lahaa, laakiin waxaan filayaa in uu noqon lahaa sharciga dabaal dega goolka. Ka hor waxaad iska saari kari lahayd maaliyada waxaanad la dabaal degi lahayd jamaahiirta iyaguna kaadhka digniinta ah kumaysiiyeen. Hadda uma dabaal degi kartid goolasha, sababtoo ah haddii kale garsooraha ayaa ku ciqaabaya” ayuu Neymar oo kaftamayaa hadalkiisa sii raaciyay.
Neymar JR oo ah ciyaartoy inta badan farxad badan isla markaana wajigiisa qosol badan laga dareemo ayaa ka sheekeeyay qaabkii ay waalidkiisu u soo daryeeleen in waxa ugu wayn ee uu u qabtay markii uu kubbada cagta lacag ka helay ay ahayd in uu guri u iibiyay.
Neymar oo arintaas ka hadlaya ayaa yidhi: ” Anigu waxaan soo qaatay waqtigii carruurnimo oo farxad badnaa, sababtoo ah aabahay ayaa isku dayi jiray in uu aniga iyo walaashay na siiyo wax kasta wuxuuna na siiyay nolol fiican. Kadib markii aan lacag ka sameeyay kubbada cagta, wixii ugu horeeyay ee aan qabtay wuxuu ahaa in aan guri iibiyay. In aad waalidkaa guri u iibiso , waa sharaf aan waxba la barbar dhigi karin”.
Deg Deg: Xukuumadda Somaliland Oo Ka Hadashay Jabhada Cusub Ee Gobalka Sanaag Ee Ay Ka Danbeyso Maamulka Puntland
Somaliland: Khudbadda Guddoomiye Muuse Biixi Ka Jeediyay Xafladii Loo Sameeyay Xidhitaanka Diiwaangelinta Codbixiyayaasha Somaliland
Somalia: broadens its youth soccer league through FIFA support
Somaliland: Khilaafkii UCID Oo La Furdaamiyay Iyo Salaadiin Ku Dhawaaqday Heshiis Aan Qoddobo Lahayn
Cajiib: Waa Kuma Xidiga Ugu Goolasha Badan Sanadka 2017 ?